Ngiyiphi ithuluzi lokubukela i-backlink engangisiza ngakha iphrofayli ekahle yezixhumanisi zewebhu?
Yebo, izinga le-backlink lekhwalithi liyaziwa ngokubaluleka kwabo ukuletha isipiliyoni sokuphequlula ngaphezulu komsebenzisi kuwo wonke okuqukethwe kwekhasi lewebhu noma ibhulogi. Ngokuqondene nezixhumanisi zangaphakathi, ukuhlelwa kwazo ngendlela ehlelekile kuzosiza izivakashi zangempela ziqonde ngokujulile kuzo zonke izingxenye zokuqukethwe kalula. Asikho isidingo sokuthi ukuvakashelwa isikhathi eside kubhalwa yizo zonke izihambeli, izenzo eziningi zithathwa ngokwesilinganiso, futhi igunya elikhulu lizokhishwa yizinjini ezinkulu zokusesha (njenge-Google ngokwayo, kanye ne-Yahoo ne-Bing). Eqinisweni, ama-backlink aphakathi kwamaphuzu aphezulu abusa phezu kwendawo yesimanje ye-SEO. Ngakho-ke, iphrofayili yakho yokuxhumanisa iwebhu kufanelekile ukucwaninga okungenani ngamathuluzi wokubukwa kwe-backlink esetshenziselwa ukusetshenziswa, akunjalo?
Vula Isixhumanisi Sokuxhumana Kwindlela Yokulawula Ngokuphelele
Kodwa ungayithola kanjani ukusebenza okuphezulu kokusebenza kuma-SERP we-Google? Indlela yokwenza kahle ukusetshenziswa kwama-backlink? Uzokwenzenjani uma kukhona okungahambi kahle? Futhi yiziphi izijeziso ezingenzeka kakhulu, kufanele kwenzeke kanjalo? Futhi kungani kufanele usebenze ucwaningo olubuhlungu emuva kwe-backlink ngemuva kwakho konke? Yebo, yilapho ukuqala kumnandi - futhi kuvela ukukhetha okukhulu kwamathuluzi okubukela e-backlink ahlukene. Futhi yebo, bangakusiza ukwakha iphrofayela yakho ekahle yezixhumanisi zewebhu. Ikuphi ithuluzi lokubukwa kwe-backlink okufanele ukhethe umsizi wakho ovelele ophezulu? Ake siqale ukugoqa!
3 Izindlela Zokudala Zama-Old-Fashioned to "Ideal" Xhumanisa iphrofayela
Ngaphambi kokuba siqale, ake siqiniseke ukuthi silandela lawa mathuluzi amathathu wokwakha wokuxhumanisa okujwayelekile ukuze enze iphrofayela "ekahle" yezixhumanisi zewebhu - akukho thuluzi lokubukela emuva kwe-backlink noma noma yiluphi uhlaka lokuhlaziya lungasiza ngokuqala kahle. Yingakho ngaphandle kokwenza okuhle ukugwema i-Black Hat-SEO njengenhlupho, uyanconywa ukuba ugxile emizenzweni yakho kulokhu okulandelayo:
Khumbula, okuqukethwe kuhlale kuyinkosi, ukusesha indawo kusayithi. Kusho ukuthi kufanele uhlale unamathele kokuqukethwe kwekhwalithi okuletha inani - kuqala nokuphambili.
Setha izinkinobho zangemuva ezintsha zihlala kuphela emva kokuqinisekisa okuqondile nokuqinisekiswa okucophelelayo.
Gwema ukuhweba noma ukushintshanisa ne-backlink kuzo zonke izindleko, futhi ungalokothi ufake isicelo se-PBNs (amanethiwekhi wangasese ebhulogi).
Ingabe Bewazi Konke Kuhlangene?
Okungase kusimangaze kubanikazi bewebhu abaningi be-novice ukuthi akuzona zonke izixhumanisi ezidalwa ezilingana nemvelo. Uqinisekile ukuthi uyayakha ngenjongo efanele? Ngempela, ingabe iphrofayela yakho yamanje yamalinki ewebhu ingakwazi ukuhlangabezana nokulindela okwanele ku-SEO? Masenze umehluko - into yokuthi amanye ama-backlink ahloselwe ukuletha izinzuzo ezibonakalayo ezibalulekile futhi ezilinganiselwe ku-SEO. Ngenkathi abanye bengenawo isisindo sangempela, kubonwa yizinjini ezinkulu zokusesha njengezitholile ngokuphelele futhi zingekho. Yini engaphezulu - lapha sifaka ukuhlangana okubukeka kahle - empeleni, ama-backlink angase abe ngisho nokulimaza, ikakhulukazi lapho ukusetshenziswa okungalungile kuthathwa ngokubheka isikhathi eside.
I-Flavour ngayinye ine-Taste ehlukene
Ukuyibeka ngesiNgisi esicacile, izixhumanisi ezihlukene zenzelwe ukufika ezinambithelweni eziningana ezihlukene - kungenxa yokuthi akuzona zonke izixhumanisi ukudlulisa (noma kuhloswe ukudlula) ngokusebenzisa isango lokubuyela emuva ku-SEO. Ngisho ukhiye we-backlinking ekusetshenzisweni kokusesha kuyinto PageRank (a. k. a. TrustRank) uhlelo oluphawulekayo lwemethrikhi yekhwalithi olutholakala kusuka ku-0 kuya ku-10. Ukusetshenziswa kwale ncazelo eyisisekelo kuvunyelwe ukuguqula wonke ukubaluleka kwekhasi lewebhu, ukuthembeka, negunya libe yisibonisi sezintandokazi ezinobuningi kakhulu.
Ngakho-ke, masiphinde sibheke futhi - ngaphambi kwanoma yini enye, iphrofayela yakho yokuxhumanisa yewebhu ethi "ekahle" kufanele itholakale kuphela nge-backlinks enhle. Ngokusho kwe-SEO, kusho ukuthi kufanele uhlale ucacile kusuka ku-Link Directirect no-No Follow, noma okungenani ugweme ukuyisebenzisa ngaphandle kwenhloso enengqondo.
Ukuqondisa kabusha izixhumanisi
Isixhumanisi esiqondisa kabusha simelela izixhumanisi zohlobo olukhethekile ezisekelwe ku-redirect (evame ukubhalwa ku-PHP) - ukuletha kuwebhusayithi ehlosiwe ngekhasi eliphakathi (ngaphakathi kwewebhusayithi efanayo ), esikhundleni sokukuxhumanisa ngqo kwelitshe kwelinye shot.
Izixhumanisi ezingezona-Landela zihlanganisiwe nge-Nofollow value attribute value. Lolu hlobo lwezixhumanisi lubude obude nomqondo wangempela we-hyperlink eyenzelwe izinjongo ze-SEO ngencazelo. Ngakho-ke, esikhundleni sokubheja ku-SEO, ixhumanisa ne-Nofollow ikhomba ngokuqondile ku-URL yewebhsayithi elihlosiwe ekuhambeni okulodwa - kunganikezeli igunya noma ukudluliselwa okuthembisayo. Yiqiniso, izixhumanisi ezingezona-Landela zenzelwe umugqa wezizathu - isibonelo, zikhonza ukumelana nezinhlobo ezithile ze-spam yosesho (ngaphandle kwalokho, ukuvimbela u-spamdexing). Zibuye zisetshenziselwe ukushiya umnyango ovulelekile isipiliyoni sokuphequlula abantu kuphela (i. e. , abadluli i-link-juice). Ngakho-ke, ukusebenzisa isici sesixhumanisi se-No-Follow kungaba isinqumo esenziwe kahle, e. g. , ikakhulukazi kulabo abakhulu bewebhu kanye nabanikazi besayithi abaxhumanisa ngokuzithandela amakhasi wegaxekile ngesizathu esithile.
Izinzuzo ze-Smart Pick
Njengoba kukhona konke, masibuyele emuva ekuxoxweni kwethu kwamanje - ithuluzi luni lokubukela emuva lingenza iphrofayli ekahle yezixhumanisi zewebhu? Yebo, lokho kuncike. Kalula nje ngoba ngihlolwe amathuluzi amaningi wokuhlaziya ahlukene ngonyaka odlule - nazo zonke izici zawo eziyingqayizivele, nezindawo ezibuthakathaka ezimbi. Kepha mina, ngithole okulandelayo okukhethwa kukho okulandelayo - i-Open Site Explorer yakwaMoz, i-Semalt Analyzer (Semalt), i-Majestic SEO Toolkit, ne-Ahrefs Backlink Viewer / Checker Tool. Yiqiniso, kuwukuphela kwakho ukuthi uthathe isinqumo - kodwa ngikuphikelela ukuthi uzame ngamunye wabo, okungenani ngokufushane. Qaphela, ukuthi ngifinyelele ekukhethweni okuhle okwenziwe kahle ukukhetha amathuluzi abukeli obuhle kakhulu obubukela emuva futhi ngenza isofthiwe yokuhlaziya - ngibheke ukubaluleka kwangempela kweziphakamiso zabo ezisebenzayo, isipiliyoni somsebenzisi wekhwalithi, isethi enembile yezinketho eziyisisekelo, kanye nemiphumela ekugcineni, okufaka phakathi Ukuqondisisa okunembile kakhulu.
Gcina izinsongo ekubambeni
Ngesiphetho, ngingathanda ukukutshela okuyisisekelo kakhulu ukwakha iphrofayela yakho efanele. Ngisho ukuthi ngaphambi kokuhlola ama-horizons amasha ngethuluzi lakho lokubukwa ngemuva kwe-backlink, ungcono ukulungisa umlayezo wakho osevele usuvele ukhona. Yiba nesiqalo esihlanzekile - sebenzisa Ithuluzi le-Google Disavow ukuze ususe konke okungase kukulimaze isu lakho le-SEO esikalini, noma okungenani ukwehla izinga lephrofayela yakho ye-backlink ngezinga elithile. Ngamafuphi, ngisho noma nje uzwa okuthile okusolisayo ngewebhusayithi ethize oxhumene nayo - qaphela ukuqeda noma yimiphi impikiswano emibi. Ukwenza kanjalo, sebenzisa ithuluzi le-disavow ukuze "utshele" i-Google ukuthi ungacabangi lezi zixhumanisi ezingavamile ongaqiniseki ngakho, okungenani okwamanje. Ngaleyo ndlela, abaningi be-webmasters abaqeqeshiwe basebenzisa leli thuluzi eliyisisekelo (kunalokho kulabo abathandwayo bokubukwa kwe-backlink) - ukuze babuyele futhi bahlehlise, balungise, noma benze ukulungisa okusheshayo nganoma yimiphi imikhuba ye-SEO esedlule abaye bayibamba ngokukhethekile ukucabangela Source .